Kudutshulwe kwabulawa obeyikhansela | News24
Skhosiphi Mthembu noPhumlani Gama, ILANGA
Durban - Uphele sekumuncu umcimbi kaMasipala waseMtubatuba, ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natal kudutshulwa ekhanda kubulawa owesilisa oke waba yikhansela le-African National Congress (ANC) ngoMgqibelo ngezithuba zehora lesi-7 kusihlwa.
UMnu Bonga Msomi,51, udutshulwe ngumuntu ongaziwa ezipholele nomngani wakhe bezithokozisa ngeziphuzo ezibandayo.
Kubikwa ukuthi umsowa ubize uMnu Msomi wazenza umuntu omangayo kanti useyamdubula. Lesi sigameko senzeke eduze nalapho bekunentatheli yeLANGA ngakhona ebimatasa ithwebula izithombe njengoba bekunedili lomculo kamasikandi ebelihlelwe wumasipala.
Nakuba kwenzeke lesi sigameko kodwa umcimbi uqhubekile. Iningi lamalunga omphakathi ebelithamele umcimbi, kaliwuzwanga umsindo wesibhamu njengoba bekunomsindo womculo obudlalwa esiteji.
Ngokuthola kwaleli phephandaba, kunezinsolo eziqinile zokuthi lesi sigameko sihlobene nezepolitiki. Imithombo yeLANGA ilipotshozele ukuthi umufi ubesongelwa ngamanye amalunga e-ANC ethi azogcina eqedile ngaye ngoba udayise ngewadi abeyiphethe.
Nyakenye njengoba bekunokhetho lohulumeni basekhaya mhla zintathu kuNcwaba (August), umufi ubengenele ngokuzimela ukhetho lokuba yikhansela kuwadi 14 kulo masipala ngemuva kokuba ekhale ngaphansi okhethweni lwangaphakathi kwi-ANC lapho kusuke kuqokwa okuzofoloswa ngaye okhethweni.
Kubikwa ukuthi lokho kakwehlanga kahle kuyena wagcina eqoke ukuzimela. Le wadi igcine ihlwithwe yiNkatha Freedom Party (IFP) - okumanje iphethwe nguMnu Fisokuhle Mpanza.
Kubikwa ukuthi nakuba ebengenalo igatsha kodwa kukhona lapho eke wabonakala ezibandakanya nabaholi baleli qembu ngaphansi kwesifunda uMkhanyakude.
Kwenzeka lokhu nje, ILANGA lihabule ngomthombo walo ukuthi amaphoyisa kawaziswanga kusenesikhathi ngalo mcimbi njengoba - kuthiwa atshelwe ngoLwesine ngawo.
Kuthiwa lokhu kakuwanikezanga isikhathi esanele sokuhlela ezokuphepha njengoba ubunabantu abaningi abebezowuhambela.
Umthombo uthi lokhu kugcine kuholela ekutheni singabikhona isibalo esanele samaphoyisa abezoqapha umcimbi.
OLUNYE UDABA: Kusaqhubeka ukuthungathwa kukababa womfundi owafika nesibhamu esikoleni
"Ngokujwayelekile uma kuzoba khona umcimbi ozobiza abantu abaningi njengalona, kuyaye kudingeke ukuba kubizwe iPublic Oder Police, okuyiyona okumele iqaphe isimo. Kulokhu kakwenzekanga lokho, okuchaza ukuthi ezokuphepha bezingaqinile neze," kusho umthombo ongaphakathi emaphoyiseni.
UNkk Khanyi Msomi oyinkosikazi kamufi, uthi bewumndeni basashaqekile ngalesi sigameko. Utshele leli phephandaba ukuthi kazikho izinsongo azaziyo ebezitholwa ngumyeni wakhe.
"Sibuhlungu kakhulu ngokwenzekile ngoba ubengumuntu wabantu futhi ekhonze kakhulu ukusebenzela umphakathi. Nalapha ekhaya ubewusizo kakhulu futhi ewuthanda umndeni wakhe," kusho uNkk Msomi.
UMnu Siyabonga Khumalo ongusihlalo we-ANC eMtubatuba, uthi kababoni ukuthi ukubulawa kukaMnu Msomi kuhlobene nezepolitiki. Uthi bayasola ukuthi kuhlangene nemibango kamasikandi njengoba ubengumuntu owukhonze kakhulu futhi ewulandela njengoba bekuwumcimbi wawo.
"UMnu Msomi ubengasalona ilunga le-ANC njengoba iqembu limxoshile namanye amakhansela abezimele ngesikhathi kunokhetho lohulumeni basekhaya. Kasicabangi ukuthi lokhu kuhlobene nepolitiki," kusho uMnu Khumalo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa aseMtubatuba aphenya ngecala lokubulala kodwa bekungakaboshwa muntu kanti nembangela yokubulawa kukaMnu Msomi kayikaziwa.
IMeya yaseMtubatuba, uMnu Qhina Mkhwanazi, ithe bayazwelana nomndeni ngento eyenzekile kanti basazohlangana kumasipala ukuze bayobhonga emswaneni.
Uthi ngokwazi kwakhe amaphoyisa abetsheliwe ngalo mcimbi ngoba abekhona ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko.
“Ngeke ngazi ukuthi aziswe nini ngoba bengingekho kuleli thimba ebelihlela umcimbi kodwa wona abekhona ngoba ngiwabonile,” kusho uMnu Mkhwanazi.